ကျောင်းဖွင့် ၊ ကျောင်းပိတ် ရက် ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ချက် – May News
ကျောင်းသားမိဘတွေ သိသင့်တဲ့သတင်း ….
အခြေခံပညာကျောင်းများဖွင့်ရက်ကို မူလသတ်မှတ်ချက်ထက် ခြောက်ရက်လျှော့
ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုများရှိ ပြီးနောက် အခြေခံပညာကျောင်း များကို မတ်လ ၂၅ ရက်အထိသာ ဖွင့်မည်ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန က ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည်။…
ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုများရှိ ပြီးနောက် အခြေခံပညာကျောင်း များကို မတ်လ ၂၅ ရက်အထိသာ ဖွင့်မည်ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန က ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည်။
ယခုပညာသင်နှစ်ကစတင် ကာ မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ ကျောင်းဖွင့်မည်ဟု ဝန်ကြီးဌာန၏ သတ် မှတ်ချက်ကို ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုများရှိပြီးနောက် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးများပါဝင်သည့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ သည်။
ထိုအစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ မူလသတ်မှတ်ချက် ထက် ခြောက်ရက်လျှော့ပြီး မတ် လ ၂၅ ရက်အထိ ကျောင်းဖွင့်ရန် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
‘‘ကျောင်းတွင်းစစ်စာမေးပွဲ ကိစ္စကိုတော့ ဖြေလျှော့ပစ်လိုက် တယ်။ ကျောင်းတွင်းစစ်စာမေးပွဲ တွေကို မတ်လ ၂၃ မှ ၃၁ အထိ စစ်ဆေးမယ်လို့ မူလကြေညာ ထားပေမယ့် အဲဒီအတိုင်း မလုပ် တော့ဘူး။
ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ စာစစ်ဖို့၊ အောင်စာရင်းထွက်ဖို့ ကိစ္စတွေက မတ်လအတွင်း ပြီး အောင်လုပ်ရတာမို့ မတ် ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ မှာပဲ စာမေးပွဲဖြေမယ်’’ဟု အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ တင်မောင်ဝင်းက ဆိုသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက် ကြေညာချက် အရ စတုတ္ထတန်းနှင့် အဋ္ဌမတန်း နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်မှ မတ်လ ၃ ရက်အထိ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း နှစ်ဆုံးစစ် ဆေးခြင်းကို ဖေဖော်ဝါရီအတွင်း ကျင်းပရန် သတ်မှတ်ထားသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို မတ်လ ၁၁ ရက်မှ ၂၀ ရက်အထိ
ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်အတန်း များ၏ နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲကို မတ်လ ၂၃ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိ ကျင်းပ မည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။
ယမန်နေ့က နေပြည်တော် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် စတုတ္ထ တန်းနှင့် အဋ္ဌမတန်း၊ တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း စာမေးပွဲအချိန်စာရင်း အပြောင်းအလဲမရှိဘဲ ကျန်အ တန်းများ၏ စာမေးပွဲရက်ကိုသာ မတ်လ ၂၃ ရက်မှ မတ်လ ၂၅ ရက်အထိ တစ်ရက်လျှင် နှစ်ဘာ သာနှုန်း ပြောင်းလဲစစ်ဆေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟု ဒေါက်တာ တင်မောင်ဝင်းက ပြောသည်။
စတုတ္ထတန်းနှင့် အဋ္ဌမတန်း၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများ ဖြေဆိုချိန်တွင် စာစစ်ဌာနမရှိ သည့်ကျောင်းများ၌ အခြားအ တန်းများ ဖွင့်ထားမည်ဖြစ်ပြီး စာ စစ်ဌာနရှိသည့်ကျောင်းများနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမအင်အား မလုံ လောက်သည့် ကျောင်းများကို ပိတ်ထားရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ရာသီဥတုအပူဒဏ် ရှောင် နိုင်ရန် ဒေသအခြေအနေအရ ကျောင်းချိန်ကိုလည်း နံနက်ပိုင်း နေ့တစ်ဝက်သာ ဖွင့်ခြင်းမျိုးလုပ် နိုင်ရန် ခွင့်ပြုထားသည်ဟု ဒေါက် တာတင်မောင်ဝင်းကဆိုသည်။
မြို့နယ်အလိုက် အသေး စိတ်စီမံချက်များကို မြို့နယ်ပညာ ရေးမှူးများကရေးဆွဲပြီး သက် ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံသို့တင်ပြကာ အ စိုးရအဖွဲ့ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဆောင် ရွက်ရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ ကျောင်းဖွင့် မည့်သတ်မှတ်ချက် ကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြန် လည်ပြင်ဆင်မှု ရှိ၊ မရှိ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် အစည်းအဝေးရလဒ်ကို ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ကျောင်းသား မိဘများက စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်များအတိုင်း ဖေဖော် ဝါရီကုန်အထိသာ အခြေခံပညာ ကျောင်းများဖွင့်ရန် အများစုက မျှော်လင့်ခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ထို သတ်မှတ်ချက်ကို ပြင်ဆင်မပေး ပါက ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲရုံတာဝန်ထမ်းမည်မဟုတ်ဟု မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်(MTF)က ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင် သဘော ထားကြေညာခဲ့သည်။
အခြေခံပညာရေး စာသင် ကာလကို မတ်လကုန်အထိသတ် မှတ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်သည့်ဖဲကြိုး စိမ်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်စတစ်ကာ ကမ် ပိန်းကို နိုင်ငံ့အနှံ့ရှိ ပညာရေး တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်အားလုံး တွင် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်ကစတင် ပြုလုပ်နေသည်။
‘‘ီဒီနှစ်က စပြောင်းလဲတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြောင်းလဲမှုရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အသံလေးတွေက တော့ ထွက်မှာပေါ့။ ဒီလိုလုပ်ငန်း တွေဆိုတာ အလွှာစုံနဲ့ ကြိုတင်ညှိ နှိုင်းပြီးတော့ ထုတ်ပြန်ရမှာပေါ့။
အခုက ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးသား ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဲဒီအ တိုင်းပဲ လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်။ ကြေ ညာထားတဲ့အတိုင်း လုပ်လည်း လုပ်တယ်။
ရှဉ့်လည်းလျှောက် သာ၊ ပျားလည်းစွဲသာ သဘောမျိုး နဲ့ အကုန်လုံးဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ Work Plan ကို ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာ ဆွဲခဲ့တာ’’ဟု ဒေါက်တာတင် မောင်ဝင်းက ဆိုသည်။7 Day
ကြောငျးသားမိဘတှေ သိသငျ့တဲ့သတငျး ….
အခွခေံပညာကြောငျးမြားဖှငျ့ရကျကို မူလသတျမှတျခကျြထကျ ခွောကျရကျလြှော့
ဝဖေနျကနျ့ကှကျမှုမြားရှိ ပွီးနောကျ အခွခေံပညာကြောငျး မြားကို မတျလ ၂၅ ရကျအထိသာ ဖှငျ့မညျဟု ပညာရေးဝနျကွီးဌာန က ပွောငျးလဲသတျမှတျသညျ။…
ဝဖေနျကနျ့ကှကျမှုမြားရှိ ပွီးနောကျ အခွခေံပညာကြောငျး မြားကို မတျလ ၂၅ ရကျအထိသာ ဖှငျ့မညျဟု ပညာရေးဝနျကွီးဌာန က ပွောငျးလဲသတျမှတျသညျ။
ယခုပညာသငျနှဈကစတငျ ကာ မတျလ ၃၁ ရကျအထိ ကြောငျးဖှငျ့မညျဟု ဝနျကွီးဌာန၏ သတျ မှတျခကျြကို ဝဖေနျကနျ့ကှကျမှုမြားရှိပွီးနောကျ ဇနျနဝါရီ ၉ ရကျတှငျ နပွေညျတျော၌ တိုငျးနှငျ့ပွညျနယျ ပညာရေးမှူးမြားပါဝငျသညျ့ အစညျးအဝေးပွုလုပျခဲ့ သညျ။
ထိုအစညျးအဝေး ဆုံးဖွတျခကျြအရ မူလသတျမှတျခကျြ ထကျ ခွောကျရကျလြှော့ပွီး မတျ လ ၂၅ ရကျအထိ ကြောငျးဖှငျ့ရနျ ပွောငျးလဲသတျမှတျခွငျးဖွဈသညျ။
‘‘ကြောငျးတှငျးစဈစာမေးပှဲ ကိစ်စကိုတော့ ဖွလြှေော့ပဈလိုကျ တယျ။ ကြောငျးတှငျးစဈစာမေးပှဲ တှကေို မတျလ ၂၃ မှ ၃၁ အထိ စဈဆေးမယျလို့ မူလကွညော ထားပမေယျ့ အဲဒီအတိုငျး မလုပျ တော့ဘူး။
ဆရာ၊ ဆရာမတှရေဲ့ စာစဈဖို့၊ အောငျစာရငျးထှကျဖို့ ကိစ်စတှကေ မတျလအတှငျး ပွီး အောငျလုပျရတာမို့ မတျ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ မှာပဲ စာမေးပှဲဖွမေယျ’’ဟု အခွခေံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဒေါကျတာ တငျမောငျဝငျးက ဆိုသညျ။
ပညာရေးဝနျကွီးဌာန၏ ဒီဇငျဘာ ၂၇ ရကျ ကွညောခကျြ အရ စတုတ်ထတနျးနှငျ့ အဋ်ဌမတနျး နှဈဆုံးစာမေးပှဲကို ဖဖေျောဝါရီ ၂၄ ရကျမှ မတျလ ၃ ရကျအထိ၊ တက်ကသိုလျဝငျတနျး နှဈဆုံးစဈ ဆေးခွငျးကို ဖဖေျောဝါရီအတှငျး ကငျြးပရနျ သတျမှတျထားသညျ။
တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့စာမေးပှဲကို မတျလ ၁၁ ရကျမှ ၂၀ ရကျအထိ
ကငျြးပမညျဖွဈပွီး ကနျြအတနျး မြား၏ နှဈဆုံးစာမေးပှဲကို မတျလ ၂၃ ရကျမှ ၃၁ ရကျအထိ ကငျြးပ မညျဟု ကွညောခဲ့သညျ။
ယမနျနကေ့ နပွေညျတျေျာ အစညျးအဝေးအပွီးတှငျ စတုတ်ထ တနျးနှငျ့ အဋ်ဌမတနျး၊ တက်ကသိုလျ ဝငျတနျး စာမေးပှဲအခြိနျစာရငျး အပွောငျးအလဲမရှိဘဲ ကနျြအ တနျးမြား၏ စာမေးပှဲရကျကိုသာ မတျလ ၂၃ ရကျမှ မတျလ ၂၅ ရကျအထိ တဈရကျလြှငျ နှဈဘာ သာနှုနျး ပွောငျးလဲစဈဆေးရနျ ဆုံးဖွတျခဲ့သညျဟု ဒေါကျတာ တငျမောငျဝငျးက ပွောသညျ။
စတုတ်ထတနျးနှငျ့ အဋ်ဌမတနျး၊ တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့စာမေးပှဲမြား ဖွဆေိုခြိနျတှငျ စာစဈဌာနမရှိ သညျ့ကြောငျးမြား၌ အခွားအ တနျးမြား ဖှငျ့ထားမညျဖွဈပွီး စာ စဈဌာနရှိသညျ့ကြောငျးမြားနှငျ့ ဆရာ၊ ဆရာမအငျအား မလုံ လောကျသညျ့ ကြောငျးမြားကို ပိတျထားရနျ စီစဉျထားသညျဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။
ရာသီဥတုအပူဒဏျ ရှောငျ နိုငျရနျ ဒသေအခွအေနအေရ ကြောငျးခြိနျကိုလညျး နံနကျပိုငျး နတေ့ဈဝကျသာ ဖှငျ့ခွငျးမြိုးလုပျ နိုငျရနျ ခှငျ့ပွုထားသညျဟု ဒေါကျ တာတငျမောငျဝငျးကဆိုသညျ။
မွို့နယျအလိုကျ အသေး စိတျစီမံခကျြမြားကို မွို့နယျပညာ ရေးမှူးမြားကရေးဆှဲပွီး သကျ ဆိုငျရာတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ပွညျ နယျအစိုးရအဖှဲ့ထံသို့တငျပွကာ အ စိုးရအဖှဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ဆောငျ ရှကျရနျ ညှနျကွားထားကွောငျး ၎င်းငျးကဆိုသညျ။
မတျလ ၃၁ ရကျအထိ ကြောငျးဖှငျ့ မညျ့သတျမှတျခကျြ ကို ပညာရေးဝနျကွီးဌာနက ပွနျ လညျပွငျဆငျမှု ရှိ၊ မရှိ ဇနျနဝါရီ ၉ ရကျ အစညျးအဝေးရလဒျကို ပညာရေး အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ကြောငျးသား မိဘမြားက စောငျ့ကွညျ့ခဲ့ပွီး ယခငျနှဈမြားအတိုငျး ဖဖေျော ဝါရီကုနျအထိသာ အခွခေံပညာ ကြောငျးမြားဖှငျ့ရနျ အမြားစုက မြှျောလငျ့ခဲ့သညျ။
ဝနျကွီးဌာနအနဖွေငျ့ ထို သတျမှတျခကျြကို ပွငျဆငျမပေး ပါက ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ မဲရုံတာဝနျထမျးမညျမဟုတျဟု မွနျမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ ဆရာ၊ ဆရာမမြားအဖှဲ့ခြုပျ(MTF)က ဇနျနဝါရီ ၅ ရကျတှငျ သဘော ထားကွညောခဲ့သညျ။
အခွခေံပညာရေး စာသငျ ကာလကို မတျလကုနျအထိသတျ မှတျခွငျးကို ကနျ့ကှကျသညျ့ဖဲကွိုး စိမျးလှုပျရှားမှုနှငျ့စတဈကာ ကမျ ပိနျးကို နိုငျငံ့အနှံ့ရှိ ပညာရေး တက်ကသိုလျနှငျ့ ကောလိပျအားလုံး တှငျ ဇနျနဝါရီ ရ ရကျကစတငျ ပွုလုပျနသေညျ။
‘‘ီဒီနှဈက စပွောငျးလဲတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ပွောငျးလဲမှုရဲ့ ထုံးစံအတိုငျး အသံလေးတှကေ တော့ ထှကျမှာပေါ့။ ဒီလိုလုပျငနျး တှဆေိုတာ အလှာစုံနဲ့ ကွိုတငျညှိ နှိုငျးပွီးတော့ ထုတျပွနျရမှာပေါ့။
အခုက ထုတျပွနျကွညောပွီးသား ဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ အဲဒီအ တိုငျးပဲ လုပျကိုလုပျရမယျ။ ကွေ ညာထားတဲ့အတိုငျး လုပျလညျး လုပျတယျ။
ရှဉျ့လညျးလြှောကျ သာ၊ ပြားလညျးစှဲသာ သဘောမြိုး နဲ့ အကုနျလုံးဝိုငျးစဉျးစားပွီးတော့ ဘယျလိုလုပျကွမလဲဆိုတဲ့ Work Plan ကို ဒီနအေ့စညျးအဝေးမှာ ဆှဲခဲ့တာ’’ဟု ဒေါကျတာတငျ မောငျဝငျးက ဆိုသညျ7 Day
ဒေါင်း ​ကျော်ထက်အောင် မိုးဟေကို ပိုင်ဖြိုးသုတို့နဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူးတော့မယ့်” အေးမြဖြူ”…